Clothes - iHome ► Shopping Time
မူလသို > ဖက်ရှင်>ကလေးများအတွက်>Clothes
ကုန်ပစ္စည်း 25 ခု ရှိပါသည်
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် COPTER (Model No . BST 005053 ) 1. သားသားတို့ အတွက် ပွဲတက်ရာတွင် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. အရောင်စပ်လေး များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။ 3. ကာလာစုံ ရရှိနိင်ပါသည်။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် ANCLLOR (Model No . BST 000000009) 1. သားသားတို့ အတွက် ပွဲတက်ရာတွင် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. အေးမြသော ချည်သားလေး များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။ 3. အောက်ခံ အရောင်ကွဲလေးများ ရရှိနိင်သည်။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် CONVERSE ALL STAR (Model No . BST 000000003) 1. သားသားတို့ အတွက် ပွဲတက်ရာတွင် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. အေးမြသော ချည်သားလေး များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။ 3. 1 colour
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Super Kangaroo (Model No . BST 000000003) 1. သားသားတို့ အတွက် ပွဲတက်ရာတွင် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. အေးမြသော ချည်သားလေး များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။ 3. ကာလာစုံ ရရှိနိင်ပါသည်။
ANCLLOR ( ချည်သား )
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် ANCLLOR ( ချည်သား ) (Model No . BST 00000000 14 ) 1. သားသားတို့ အတွက် ပွဲတက်ရာတွင် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. အေးမြသော ချည်သားလေး များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။ 3. ကာလာစုံ ရရှိနိင်ပါသည်။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် DEEPER TEAM (Model No . BST 000000006) 1. သားသားတို့ အတွက် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. အေးမြသော ချည်သားလေး များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် ဆွဲသား လက်ရှည် (Model No . GST 0000009) 1. မီးမီးတို့ အတွက် ပွဲတက်ရာတွင် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။
Mall Kids Collection
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Mall Kids Collection (Model No . BST 000000003) 1. သားသားတို့ အတွက် အကွက်လေးများနင့် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. အေးမြသော ချည်သားလေး များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် Mall Kids Collection (Model No . BST 000000004) 1. သားသားတို့ အတွက် အကွက်လေးများနင့် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. အေးမြသော ချည်သားလေး များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။
De Berry ( လက်ရှည် )
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် De Berry ( လက်ရှည် ) (Model No . GST 08/1 ) 1. မီးမီးတို့ အတွက် ပွဲတက်ရာတွင် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. အပေါ် ကုပ်တွင် ပန်းပွင့်လေးများနင့် လှပစွာပုံဖော်ထားခြင်း။
ဂါဝန် ( Barbie )
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် ဂါဝန် ( Barbie ) (Model No . GSH 00000004) 1. မီးမီးတို့ အတွက် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. ချည်သား ၊ ဇာ များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။ 3. မီးမီး တို့ အကြိုက် ကာတွန့် အရုပ်ကလေးပါဝင်ခြင်း။
ဂါဝန် ( ချည်သား )
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် ဂါဝန် ( ချည်သား ) (Model No . GSH 00000003) 1. မီးမီးတို့ အတွက် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. ချည်သား စစ်စစ်ဖြစ် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။
ပွဲတက် ဂါဝန် ( Barbie )
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် ပွဲတက် ဂါဝန် ( Barbie ) (Model No . GSH 00000004) 1. မီးမီးတို့ အတွက် ပွဲတက်ရာတွင် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. ချည်သား ၊ ဇာ များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။
PLACE ( ဂျင်းညို )
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် PLACE ( ဂျင်းညို ) (Model No . BST 00000000 1) 1. သားသားတို့ အတွက် ပွဲတက်ရာတွင် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. နွေးထွေးစေသော ဂျင်းသား များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။ 3. 1 colour
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် ဂါဝန် ( ချည်သား ) (Model No . GSH 00000005) 1. မီးမီးတို့ အတွက် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. ချည်သား စစ်စစ်ဖြစ် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် ဂါဝန် ( ချည်သား ) (Model No . GSH 0000000 8 ) 1. မီးမီးတို့ အတွက် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. ချည်သား စစ်စစ်ဖြစ် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။
ပွဲတက် ဂါဝန် ( Frozen )
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် ပွဲတက် ဂါဝန် ( Frozen ) (Model No . GSH 0000000 1 ) 1. မီးမီးတို့ အတွက် ပွဲတက်ရာတွင် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. ဖဲသား ၊ ဇာ များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။ 3. ဂါဝန် ၏ နောက်ကျောတွင် ဇစ်ပါခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် ပွဲတက် ဂါဝန် (Model No . GSH 0000000 8 ) 1. မီးမီးတို့ အတွက် ပွဲတက်ရာတွင် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. ဖဲသား ၊ ဇာ များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။ 3. ဂါဝန် ၏ နောက်ကျောတွင် ဇစ်ပါခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် ပွဲတက် ဂါဝန် (Model No . GSH 00000002) 1. မီးမီးတို့ အတွက် ပွဲတက်ရာတွင် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. ဂါဝန် ၏ အောက်တွင် နောက်တစ်ထပ် ပါဝင်ခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် ဘဲလေး ဂါဝန် (Model No . GSK 0000007) 1. မီးမီးတို့ အတွက် ပွဲတက်ရာတွင် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. ရွှေရောင်လေး များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။ 3. ဂါဝန် ၏ နောက်ကျောတွင် ဇစ်ပါခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် ပွဲတက် ဂါဝန်ဇာ (Model No . GSH 0000000 28 ) 1. မီးမီးတို့ အတွက် ပွဲတက်ရာတွင် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. ဇာ များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် ပွဲတက် ဂါဝန် (Model No . GSH 0000000 1 ) 1. မီးမီးတို့ အတွက် ပွဲတက်ရာတွင် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. ဖဲသား ၊ ဇာ များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။ 3. ဂါဝန် ၏ နောက်ကျောတွင် ဇစ်ပါခြင်း။
Tha Pyay Phuu အမှတ်တံဆိပ် ပွဲတက် ဂါဝန်ဇာ (Model No . GSH 00000009) 1. မီးမီးတို့ အတွက် ပွဲတက်ရာတွင် လှပစွာဝတ်ဆင်နိင်ခြင်း။ 2. ဇာ များနင့် လှပစွာ ပြုလုပ်ထားခြင်း။ 3. ဂါဝန် ၏ နောက်ကျောတွင် ဇစ်ပါခြင်း။